Etu esi ebudata ma ọ bụ lelee ihe nkiri na gam akporo gị | Gam akporosis
Etu esi ebudata ma ọ bụ lelee ihe nkiri na ọnụahịa gam akporo gị
Ka ukwuu ma ọ bụ pere mpe, anyị niile na-enwe mmasị na fim, mmadụ na-agwa gị na afọ gara aga ha kwuru na ha enweghị mmasị na ya ma na-ekiri opekempe ihe nkiri anọ ma ọ bụ ise kwa izu, na-agụghị ndị na TV. Imirikiti n'ime anyị na-achọkwa ịga na sinima iji hụ ihe nkiri na nnukwu ihuenyo na ụda kacha mma, mana nke a anaghị ekwe omume mgbe niile. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịga ihe nkiri, ihe kachasị mma bụ budata ihe nkiri na ngwaọrụ gam akporo anyị ma ọ bụ lee ha n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe n'eziokwu, ọ gaghị abụ ezigbo echiche mgbe niile ile ihe nkiri na gam akporo ngwaọrụ yana ọ bụ ya mere anyị ga-eji ekwukwa ụzọ iji budata ihe nkiri na, ọ bụrụ na anyị chọrọ, lee ha ma emechaa na TV na ngwaọrụ kwekọrọ . Dị ka ihe niile metụtara sistemụ arụmọrụ Google, enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta ụdị ọdịnaya a, yabụ anyị ga-enye gị ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a, yana dị ka peeji nke na-enye ike ibudata ma lelee ihe nkiri na gụgharia.
1 Ngwa ibudata ihe nkiri na gam akporo
1.1 Gwuo egwu
1.3 Ihe ọkpụkpọ vidiyo dị egwu
2 Peeji iji budata ihe nkiri na gam akporo
Ngwa ibudata ihe nkiri na gam akporo
Dị ka Google na-enye ọdịnaya nke ya, ọ ga-esiri ike ịhụ ngwa ngwa ndị na-akwadoghị nke na-enye anyị ohere ibudata ihe nkiri na Google Play. Ihe kachasịkarị n ’ọnọdụ ndị a bụ na anyị ga-ebudata ha n’ụzọ ndị ọzọ. Kedu ka ị ga - esi hụ na vidiyo gara aga, Gwuo egwu bụ otu n'ime ngwa kachasị mma iji budata ihe nkiri na ngwanrọ gam akporo anyị, nke ga-enyere anyị aka ile ha n'oge ọ bụla na-enweghị mkpa njikọ Internetntanetị ma ọ bụ lelee ha ka ha na-asọba site na ọdụ anyị ma ọ bụ site na telivishọn ejikọtara na Chromecast.
Ọrụ onye ọrụ nke PlayView dị ezigbo mma, ịbụ otu mmepụta oyiri nke Google Play Movies ma ọ bụ ngwa Google Play Music nke nwere njikọta doro anya na sistemụ arụmọrụ gam akporo yana interface ya na ụdị kachasị ọcha. ihe onwunwe Design. Ọ bara uru, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụnye ya, anyị ga-eme ya site na ụlọ ahịa ndị ọzọ dịka Aptoide, blackmart ma obu ibudata ya .apk si EGO
Ọ bụrụ na ihe arụ ọrụ, emetụla ya aka. Ọ bụrụ na nbudata iyi na-arụ ọrụ, ọ bara uru iburu n'uche mgbe niile. Ofdị nke BitTorrent maka gam akporo ọbụghị na o nwere ọtụtụ nhọrọ dịka ụdị desktọọpụ, mana ọ na-arụ ọrụ, nke bụ ihe dị mkpa. Ọ bụ ezie na o nwere injin nchọ nke aka ya, ọ ga-adị mma ka ị gaa peeji ndị dị ka ThePirateBay ma ọ bụ Kickass Torrents, mee nchọta maka ihe nkiri anyị chọrọ ibudata (ọ bụrụ na anyị chọrọ ya n'asụsụ Spanish, ọ bara uru ịgbakwunye "spanish", na-enweghị kwuputa, na ọchụchọ), budata faịlụ .torrent ma gbaa ya ọsọ. BitTorrent ga-emeghe na-akpaghị aka wee budata nbudata ihe nkiri anyị nwere ike igwu na ngwa vidiyo ọ bụla, dịka ọkpụkpọ VLC a ma ama.
Ihe ọkpụkpọ vidiyo dị egwu
Yiri nnọọ na nke gara aga, mana m chere na ọ ka mma, bụ ngwa ndị na-enye anyị ohere igwu faịlụ ahụ .iyi ma ọ bụ.ndọta na-enweghị na-eche. Ọ bụrụ na ị jiri eMule n'oge ya, nke a ga - adị ka nhọrọ iji hụchalụ ihe nkiri a mana, ozugbo anyị nyere ya ka ọ kpọọ, a gaghị ebipụ ihe nkiri ahụ ọzọ, anyị ga-ahụ ya ruo ọgwụgwụ.
Usoro nke na-ekiri ma ọ bụ na nbudata na fim na Torrent video Player ọ dị ka nke ejiri na BitTorrent, nke bụ ịga na peeji iji chọọ .torrents, mee ọchụchọ, budata .torrent ma ọ bụ mepee njikọ .magnet na, na obere sekọnd, ọ ga-amalite igwu egwu. Ukwuu na-atụ aro usoro.
Ngwa ọzọ na-atọ ụtọ iji lelee ma ọ bụ budata ihe nkiri sitere na ngwaọrụ gam akporo bụ Pelimag.net, ọrụ ihe nkiri vidio na-ebuli elu dị ka popcorn Oge Spanish. Ngwa dị site na weebụsaịtị ya, maka Windows, Android na gam akporo TV. Dị ka ngwa dị na mpụga Google Play na ọ bụ, iji wụnye ya .apk ọ dị mkpa iji kwe ka ntinye nke ngwanrọ sitere na isi mmalite ndị dị na ntọala ngwaọrụ. Nwere njikọ gaa na web ma emechaa.
Peeji iji budata ihe nkiri na gam akporo
Na mgbakwunye na ngwa akwadoro dị ka ndị gara aga, yana ngwaọrụ gam akporo anyị nwekwara ike ibudata ma ọ bụ lelee ihe nkiri ozugbo na ihe nchọgharị site na ọnụ. Ekwadoro m iji ihe nchọgharị dịka Chrome ma ọ bụ Firefox ma chefuo ndị nwe obodo, nke na-enwekarị ọrụ ole na ole na interface ha na-ahapụ ọtụtụ ihe a chọrọ, mana ụmụ amaala nwere ike inyere anyị aka.
Ibe ndị m kwadoro ka ibudata ma ọ bụ lelee ihe nkiri si na gam akporo ngwaọrụ bụ ihe ndị a:
Maka m Chọọ bụ ihe kasị mma n’ime ha niile. Ọ nwere obodo na-arụ ọrụ nke na-ebugo njikọ ndị ahụ, ma iji hụ ọdịnaya na nkwanye na ibudata ya, ha nwere ihe nkiri na usoro nke ụdị ọ bụla, afọ na Spanish na VOS. Weebụ nwere interface dị ọcha nke na-eme ka ihe niile ọzọ obi ụtọ. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na ndị ọrụ nwere ike ikwu okwu na fim ma ọ bụ usoro, nke na-adọ anyị aka ná ntị oge ụfọdụ na ihe nkiri abaghị uru ma ọ bụ mee ka anyị ghọta na anyị ga-ahụ onye ọzọ n'ihi nkwupụta ziri ezi ha.
Ibe weebụ: Akwa Ibudo
Ọ bara uru mgbe niile ịnwe nhọrọ ịchekwa n'ime ime maka ihe nwere ike ime na nhọrọ m nke abụọ bụ HDFull. Mobiledị mkpanaka nke weebụsaịtị ha dịkwa mma nke ukwuu ma nwee ọtụtụ ọdịnaya, mana enweghị azịza na ụfọdụ ihe nkiri amachaghị ama pụtara na ọ nweghị ike ịlụ ọgụ na Pordede, opekata mpe n'echiche m. Na HDFull anyị nwekwara ike ile ihe nkiri nkiri na nkwanye ma ọ bụ budata ha ka anyị lelee ha ma emechaa na-anọghị n'ịntanetị.
Ibe weebụ: hdfull.tv
N'oge Emechiri emechi, ibe ndị ọzọ mechiri n'ihi egwu nke iwu ọhụrụ. Nbudata Ọ bụ otu n'ime ha, mana o sitere na ntụ nye elu na mma mma ọdịnaya. N'ezie, mgbe m chọrọ ibudata ihe nkiri nwere ogo dị elu, Downloadsmix na-abụkarị nhọrọ mbụ m.
Ibe weebụ: downloadmix.me
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ, mana ndị a bụ ndụmọdụ m n'ihi na ha anaghị ada m. Enwebeghị mgbe m tụpụrụ Pordede na HDFull n'otu oge ahụ, yabụ mgbe ọ bụla m gbalịrị ilele ma ọ bụ budata ihe nkiri site na ngwaọrụ gam akporo m ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, enwere m ike ịme ya na achọghị m ụzọ ndị ọzọ.
You maraworị otu esi ekiri ma ọ bụ budata ihe nkiri sitere na ngwaọrụ gam akporo gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi ebudata ma ọ bụ lelee ihe nkiri na ọnụahịa gam akporo gị
Njikọ MEGA rịọrọ maka igodo iji kpochapụ ya….
A na-edozi ya.
Mgbe m nwesịrị ya, enwere m ike inye echiche m, maka uto m echiche a dị mma ma hazie nke ọma, mana imirikiti nke ọdịnaya bụ trailers na-akpọrọ gị gaa YouTube, ma ọ bụ na ha bụ vidiyo na usoro na-abaghị uru, ma ọ bụ na ha nọ na Latin . Daalụ maka onyinye Francisco n'ọnọdụ ọ bụla.
Agbalịrị m ya ntakịrị ma ọ dị ka ọ dị nnukwu, ezigbo mma, nhazi, niile na Spanish, m gbalịrị usoro 2 na ihe nkiri 2 ma ha rụrụ ọrụ ebube.
thx, o doro anya na naanị nhọrọ na Castilian? ... enweghị ụdị mbụ na ndepụta okwu? ... n'ihi na ugbu a, m ka na-enwe popcorn oge 😉
Zaghachi Maikel Acosta
Nke a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vidiyo niile na Latin Spanish Spanish: /
Mgbe m na-ebudata ha, ekwesighi igbochi ekwentị ma ọ bụrụ na m gbochie ya, kwụsịtụrụ nbudata ahụ ma ị maara na m na-ebudata fim ndị ahụ, ọ dị ka enweghị m ike ibudata ha ọzọ mgbe ọ rụsịrị
Anaghị m ahụ na ọ nwere nhọrọ iji budata na sd kaadị, ọ ga-adị mma maka ndị anyị na-enweghị nnukwu nchekwa na ọdụ anyị
ị nwere ike ibudata ụfọdụ usoro maka pc? ma lee ya na komputa ???? ma ọ bụ qlguna a´licacion dị ka nke a maka pc na ebe ibudata ya?
Kedu ka m ga esi echekwa na sd? n'ihi na naanị 1gb fọdụrụ n'ime ebe nchekwa dị n'ime
Zaghachi nye marcos farias
Jorge Nwachukwu dijo
i nwere ike bulite maa onye biko
Zaghachi Jorge Paredes
ọ dị ezigbo mma na ngwa ahụ bụ ekele zuru oke nye ndị okike nke ngwa a magburu onwe ya
ezigbo abalị, biko ị nwere ike iduzi m otú m ga-esi wụnye Playview na windo 10 ma wụnye BlueStacks2
kacha mma free nkiri saịtị dijo
Ihe nkiri kachasị ọhụrụ na-ekiri ebe a, saịtị dị egwu n'ezie
Zaghachi saịtị kacha mma maka ihe nkiri n'efu
ihe ojoo dijo
+ 110 fim ị ga-ele na ekwentị gị na https://vi2eo.com
Ima elu, ofufe ma nyere nwa pusi aka na ikpo okwu a nke a na-akpọ Cat Knight Akụkọ
Gaa na njedebe nke Euro site na ịgba ọsọ na ihe mgbaru ọsọ ya na Ketchapp Football